SAWIRO:-Madaxweyne Farmaajo”Dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab waa mid u yaalla dhammaan dalalka Gobolka” - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Madaxweyne Farmaajo”Dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab waa mid u yaalla dhammaan dalalka...
SAWIRO:-Madaxweyne Farmaajo”Dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab waa mid u yaalla dhammaan dalalka Gobolka”
“Dagaalka aan kula jirno argagixisada ma ahan mid ku kooban Soomaaliya, waa dagaal u yaalla dhammaan dalalka Gobolka. Wax ka qabashada aragagixisadu waxa ay u baahan tahay jawaab heer Gobol ah iyo aragti mideysan oo aan ka yeelanno xaqiijinta amniga guud ee Gobolka.”
“Sharaf ayay ii tahay in aan Muqdisho imaado 45 sanno ka dib. Waxaan halkan joogay 1974, xilligaas Soomaalidu waxa ay ahaayeen dad mideysan iyo dal xoog leh.”
Previous articleKhilaaf ka taagan Dhuusamareeb
Next articleDhageyso:-Digniin loo diray Ergadii soo dooratay Xildhibaannada Golaha Shacabka